FinTech၊ Card နှင့် Payment တွေအကြောင်း ~ ကိုစစ်ကိုင်း၏ မှတ်စုများ
နည်းပညာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာမိသမျှ၊ ထိတွေ့မိသမျှ နှင့် တွေးမြင်မိသမျှတွေကို မှတ်သားထားရန် နှင့် မျှဝေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ ဘလော့ခ်ဖြစ်ပါသည်။
FinTech၊ Card နှင့် Payment တွေအကြောင်း
Ko Sagaing Saturday, December 24, 2016 FinTech
FinTech (Financial Technology) ဆိုတာ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်သည့် ငွေပေးချေခြင်း၊ ငွေလွှဲခြင်း၊ ငွေလက်ခံခြင်း၊ ငွေချေးခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း စတာတွေကို နည်းပညာ အကူအညီတွေရယူပြီး လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော့်က FinTech Industry ထဲမှာ အလုပ်လုပ်နေပြီး၊ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီက Banking ပိုင်းနှင့်ပတ်သက်တဲ့ Payment စနစ်ကို ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Payment နှင့်ပတ်သက်ပြီး သိထားသလောက် မှတ်သားထားတဲ့ မှတ်စုတစ်ခုပါ။
FinTech မှာ ငွေပေးချေခြင်း (Payment) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပုံစံမျိုးစုံတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြားသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်...
၁) ကဒ်နှင့် ငွေပေးချေခြင်း (Card Payment)
ကဒ်နှင့် ငွေပေးချေခြင်းဆိုတာ ငွေကြေးအစား ကဒ်ပြားတစ်ခုကို အစားထိုး၊ အသုံးပြုပြီး အရောင်း၊ အဝယ် လုပ်ငန်းတွေ လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကဒ်နှင့်ငွေပေးချေခြင်း လုပ်ငန်းမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ အသုံးပြုနေတဲ့ အဓိကကဒ်အမျိုးအစား (၂)မျိုးရှိပါတယ် အဲ့ဒါတွေက…
၁) MSR ကဒ် (Magnetic Stripe Card)
MSR ကဒ်ဟာ သူ့ရဲ့အစွန်းတစ်ဖက်မှာ အမဲရောင်၊ လိုင်းစင်းအထူ (Stripe) တစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့ဒီအမဲရောင်ဟာ သံလိုက်ဓါတ် (Magnetic) သဘောကို အခြေခံပြီး၊ ကဒ်ပေါ်မှာ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းထားတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ ကဒ်ထဲက အချက်အလက်တွေကို ဖတ်ဖို့၊ သိနိုင်ဖို့ MSR ကဒ်ဖတ်စက် (Magnetic Stripe Reader) လိုပါတယ်။ MSR ကဒ်တွေဟာ ယခင်က အကြွေးဝယ်ကဒ် (Credit Card) အဖြစ်တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အသင်းဝင်ကဒ်၊ ဝန်ထမ်းကဒ်၊ ဘတ်စ်ကားနှင့် ရထား စီးနင်းခွင့်ကဒ် စတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပဲ ပိုပြီးအသုံးတွင်ကျယ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
MSR ကဒ်ဖတ်တဲ့စက် (Card Reader)
၂) EMV Chip ကဒ် (Europay, MasterCard and Visa Chip Card)
EMV ဟာ MSR ထက် လုံခြုံရေးပိုင်းနှင့် နည်းပညာပိုင်းမှာ အဆင့်မြင့်သည့် ကဒ်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကဒ်မှာ လေးထောင့်ပုံစံ Chip တစ်ခုပါပြီး၊ အဲ့ဒီ Chip ထဲမှာ အချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းထားတာဖြစ်တယ်။ Smart Card လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။ EMV ကဒ်မှာ MSR လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ MSR ကို အရေးပေါ်၊ အခြေအနေကိစ္စအတွက် အရန် အသုံးပြုဖို့ MSR (FallBack MSR) လို့ခေါ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ကြားဖူးနေတဲ့ Credit Card၊ Debit Card စတာတွေဟာ EMV Chip Card အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်လို့ EMV ကဒ်တွေပဲ အဓိက အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီကဒ်တွေကို ဘဏ်တွေက သူတို့ဘဏ်မှာ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားသူ (Customer) တွေအတွက် ထုတ်ပေးတာဖြစ်ပြီး၊ ကဒ်ထဲက အချက်အလက်တွေကို ဖတ်ဖို့၊ သိနိုင်ဖို့ EMV ကဒ်ဖတ်တဲ့စက် (EMV Card Reader) ဆိုတာလိုပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကဒ်ဖတ်တဲ့စက်တွေကို စျေးသည်၊ ကုန်သည်တွေ (Merchant) အတွက် ဘဏ်တွေကနေပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်။
EMV Card ပုံစံ
EMV ကဒ်ဖတ်တဲ့စက် (Card Reader)
ကဒ်နှင့် ငွေပေးချေခြင်း (Card Payment) အလုပ်လုပ်ပုံ
စျေးဆိုင် (သို့) စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ငွေရှင်းကောင်တာမှာ စျေးဝယ် (ငွေပေးချေမယ့်သူ) က မိမိပေးချေရမယ့် ကျသင့်ငွေ အရောင်းကွန်ပြူတာစနစ် (Point Of Sale System) မှာ ပေါ်လာပြီဆိုရင် သူ့၏ကဒ်ကို စျေးသည်ကိုပေးလိုက်မယ်၊ စျေးသည်က အဲ့ဒီကဒ်ကို ကဒ်ဖတ်တဲ့စက်ထဲ ထည့်လိုက်မယ်၊ ပြီးရင် စျေးဝယ်က သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ကုဒ်နံပါတ် (PIN Number) ကိုရိုက်ထည့်မယ်၊ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကဒ်ကို ငွေပေးချေခွင့် (Approve) ပြုမယ်။ မှန်ကန်မှုမရှိဘူးဆိုရင် ငွေပေးချေခွင့် မပြုဘဲ ငြင်းပယ်မယ် (Decline)။ အဲ့ဒီလို ငွေပေးချေခြင်းမျိုးကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ စတင်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် စျေးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
၂) အင်တာနက်မှာ ငွေပေးချေခြင်း (Online Payment)
အင်တာနက်ကနေ ပစ္စည်းတစ်ခု ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းဘေလ်ဆောင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စသည့်လုပ်ငန်းတွေအတွက် အင်တာနက်မှတဆင့် ငွေပေးချေခြင်းကို ခေါ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့ သက်ဆိုင်ရာ အင်တာနက် ဝပ်ဆိုဒ်မှာ မိမိရဲ့အကောင့်တစ်ခု ဖွင့်ထား (Register) ရပါမယ်။ အကောင့်ဖွင့်ရန် မိမိရဲ့အချက်အလက်တွေ ထည့်ပေးရပါတယ်။ အဓိက အချက်အလက်တွေကတော့ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် Credit (သို့) Debit ကဒ်ရဲ့အချက်အလက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ ဝပ်ဆိုဒ်တွေမှာတော့ အကောင့်ဖွင့်စရာမလိုပါဘူး ပိုက်ဆံပေးတဲ့အချိန်မှ မိမိ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်နှင့် Credit (သို့) Debit ကဒ်မှာရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရိုက်ထည့်ပြီးငွေပေးချေရုံပါပဲ။ အဲ့ဒီမှာ တစ်ခုသတိထားရမှာက မိမိအချက်အလက်တွေထည့်လိုက်တဲ့ ဝပ်ဆိုဒ်ဟာ အမှန်အကန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ အတုအယောင် ဝပ်ဆိုဒ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အချက်အလက်တွေ ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်အပြင် မိမိ၏ Credit (သို့) Debit ကဒ်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်တာခံရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ ဝပ်ဆိုဒ်မျိုးတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သိပ်မရှိသေးပါဘူး။ အနည်းအကျဥ်းမျှသာ ရှိပါသေးတယ်။
အင်တာနက်မှာ ငွေပေးချေခြင်း (Online Payment) အလုပ်လုပ်ပုံ
အင်တာနက်မှာ ပစ္စည်းတစ်ခု (သို့) ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို ဝယ်ဖို့လိုအပ်သည့် ရွေးချယ်မှုတွေ (အရောင်၊ စျေးချိုတာ စသည့်...)လုပ်ပြီးသွားရင် ငွေရှင်းပြီးထွက်ခွာမယ်ဆိုတဲ့ (Check Out) ဆိုတာ လုပ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ Check Out လုပ်မယ့်နေရာမှာ ကျသင့်ငွေကို ဖေါ်ပြထားပြီး၊ ငွေပေးချေခြင်းကို (Make Payment) ပြုလုပ်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ မိမိရဲ့အချက်အလက်တွေ ထည့်ဖို့ ပုံစံ (Form) တစ်ခုပေါ်လာမယ်၊ အချက်အလက်တွေ ထည့်မယ်၊ ပြီးသွားရင် ဖုန်းမက်ဆေ့ချ် (SMS - Short Message Service) တစ်ခုဝင်လာမယ် ဝင်လာတဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့ချ်ကို တစ်ခါသုံး စကားဝှက် (OTP - One Time Password) လို့ခေါ်တယ်။ အဲ့ဒီ OTP ကို ဝပ်ဆိုဒ်ထဲမှာ ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်။ OTP ရဲ့အစ စာလုံးအချို့ကို ဝပ်ဆိုဒ်မှာ ဖေါ်ပြပေးထားပြီး အဲ့ဒီ နောက်ပိုင်း စာလုံးတွေကိုသာ ရိုက်ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိထည့်ခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေ မှန်ကန်တယ်၊ OTP လည်းမှန်ကန်တယ်ဆိုရင် ငွေပေးချေမှုကို အဆင်ပြေစွာ ခွင့်ပြုမှာ (Approve) ဖြစ်ပြီး၊ မမှန်ကန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ် (Decline)။ ဒါက အကောင့်ဖွင့်ရန် မလိုတဲ့ ဝပ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံပါ။ အကောင့်ဖွင့်ရန်လိုတဲ့ ဝပ်ဆိုဒ်တွေမှာတော့ အကောင့်ဖွင့် (Register) စဥ်ကတည်းက မိမိရဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ (အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ eMail လိပ်စာ၊ Credit (သို့) Debit ကဒ်မှ အချက်အလက်) စတာတွေကို ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ အဲ့ဒီ ထည့်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေထဲမှာ အဓိက eMail လိပ်စာကိုမှန်ကန်မှု ရှိမရှိစစ်ဖို့ ဝပ်ဆိုဒ်ကနေပြီး အကောင့်ဖွင့်တဲ့သူဆီကို PIN နံပါတ် (သို့) Link တစ်ခုကို eMail ပို့ပေးမယ်၊ PIN နံပါတ်ဆိုရင် ဝပ်ဆိုဒ်ထဲမှာ ပြန်ထည့်ပေးရမယ်၊ Link ဆိုရင် eMail ထဲကနေ အဲ့ဒီ Link ကို Click နှိပ်ပေးရမယ်၊ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် အကောင့်ဖွင့်တာ အောင်မြင်မယ် (Success)၊ မမှန်ကန်ဘူးဆိုရင် အကောင့်ဖွင့်တာ မအောင်မြင်ဘူး (Fail)။ အကောင့်တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်၊ အဲ့ဒီဝပ်ဆိုဒ်မှာ မိမိအကောင့်ဖြင့် (Login) ဝင်ပြီး မည်သည့်အချိန်မဆို စျေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဝယ်ထားသည့် ပစ္စည်းတွေအတွက် ငွေရှင်းပြီးထွက်ခွာမည့်အလုပ် (Check Out) ကိုလုပ်လိုက်တာနှင့် မည်သည့်အချက်အလက်မှ ရိုက်ထည့်စရာလိုပဲ ငွေပေးချေမှုကို အဆင်ပြေစွာ (Approve) လုပ်ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (သက်ဆိုင်ရာ ဝပ်ဆိုဒ်တွေရဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ စနစ်ပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက် အနည်းကျဥ်းကွဲလွဲမှု ရှိပါသည်။)
အကောင့်ဖွင့်ရန်မလိုသည့် ဝပ်ဆိုဒ်တွင် ငွေပေးချေရန် ဖောင်ပုံစံ
၃) မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း (Mobile Payment)
မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ပိုမိုပြီး၊ ကျယ်ပြန့်စွာ သုံးစွဲလာကြတဲ့ ငွေပေးချေမှုပုံစံမျိုး ဖြစ်တယ်။ Apple, Google, Samsung တို့လို နည်းပညာနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကပါ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း လုပ်ငန်းထဲမှာ (Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay) ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနှင့် အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ကိုင်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင့်ငံမှာတော့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတဲ့အတွက် မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးပြီး စျေးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ စနစ်မျိုးတွေ မရှိသလောက်ပါပဲ၊ သို့သော် AGD ဘဏ်ကနေပြီး AGDPay ဆိုတဲ့ App နှင့် စျေးဆိုင်၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ကျသင့်ငွေကို မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဖြင့် ပေးချေနိုင်တဲ့ App တစ်ခုတော့ ပေါ်ထွက်လာပါပြီ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီလိုငွေပေးချေမှုနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ Platform တစ်ခုကို 3rd Party အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုက ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စျေးဝယ်သူတွေအတွက် မည်သည့်ဘဏ်အကောင့်နှင့်မဆို မိုဘိုင်းလ် App နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး စျေးဆိုင်တွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စျေးဝယ်နိုင်ခွင့်ရမှာ ဖြစ်မှာပါ။ လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုလာတဲ့ စနစ်တွေကတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးပြီး မိမိပေးရန်ရှိသည့် ငွေကို မိမိအကောင့်မှ အခြားအကောင့်သို့ ငွေလွဲတာ (Cash Transfer)၊ ငွေထုတ်တာ (Cash Withdraw)၊ ဘေလ်ဆောင်တာ (မီတာခ၊ အင်တာနက် စသည့်) (Bill Payment)၊ ဖုန်း ပိုက်ဆံဖြည့်တာ (Top Up) စတဲ့ စနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း (Mobile Payment) အလုပ်လုပ်ပုံ
ဒီငွေပေးချေတဲ့လုပ်ငန်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၊ ကုမ္ပဏီတွေပေါ်မူတည်ပြီး ဖန်တီး၊ တည်ဆောက်ထားတဲ့စနစ်တွေသည်လည်း အနည်းငယ် ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးအစားခွဲခြား သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
၃-က) Mobile App Payment
Mobile App ကနေ စျေးဝယ်ပြီး အဲ့ဒီ Mobile App ကနေပဲ ငွေပေးချေတဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီ App တွေမှာ အွန်လိုင်းကစျေးဝယ်နိုင်တဲ့ App တွေရှိသလို (ဥပမာ။ AliExpress)၊ နာမည်ကြီးတဲ့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် တစ်ချို့၊ ဆူပါမားကတ် တစ်ချို့က သူ့တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်မိုဘိုင်းလ် App ကိုဖန်တီးထားတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ။ Starbucks Mobile App ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံဆိုရင် အရင်ဆုံး App ထဲကို မိမိ၏ Credit (သို့) Debit ကဒ်နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ပိုက်ဆံဖြည့်ထားရပါတယ်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို ဖုန်းကနေမှာလိုက်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ အမှာစာမှာ ဘားကုဒ်တစ်ခုပါလာမယ်။ အဲ့ဒီ ဘားကုဒ်ကို ငွေရှင်းကောင်တာမှာရှိတဲ့ ဘားကုဒ်ဖတ်တဲ့စက်မှာပြပြီး မှာထားတဲ့ ကော်ဖီကို ယူသွားလိုက်ရုံပါပဲ။ တချို့ App တွေကြတော့ Online Payment နှင့် လုပ်ဆောင်ပုံချင်း ဆင်တူပါတယ်။
Starbucks Mobile App နှင့် ကော်ဖီမှာနေပုံ
၃-ခ) mPOS (Mobile Point of Sale)
mPOS ဆိုတာ စျေးသည်၊ ကုန်သည်တွေ (Merchant) သုံးတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။ ဥပမာ။ အွန်လိုင်းကနေ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ပစ္စည်းပို့မှ ငွေချေမယ် (Cash in Delivery) ဆိုပြီး မှာလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့...။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်မှာ အိမ်ကိုပစ္စည်းရောက်လာမယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လက်ထဲမှာ ငွေသားကမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့် Credit (သို့) Debit ကဒ်ရှိတယ်ဆိုရင် ပစ္စည်းလာပို့တဲ့သူဆီမှာ ကဒ်ဖြင့် ငွေပေးချေလို့ရတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းပို့တဲ့သူဆီက မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ဖုန်းမှာတပ်ဆင်လို့ရသည့် ကဒ်ဖတ်စက် (Card Reader) မှတဆင့် ငွေပေးချေနိုင်တဲ့ စနစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ Card Payment နှင့် ဆင်တူပါတယ်။ (စျေးရောင်းသူက mPOS စနစ်ဝန်ဆောင်မှု မပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ ပေးချေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။)
mPOS ဖြင့် ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံနေပုံ
၃-ဂ) Contactless Payment
ဒီအကြောင်းကို သီးသန့်အောက်မှာ ရေးထားပါတယ်။
၄) အနားကပ်ပြီး ငွေပေးချေခြင်း (Contactless Payment)
ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ထားတာ နည်းနည်း ရီချင်စရာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ် :D အဲ့ဒါကို အတိအကျဘာသာပြန်ရရင်တော့ အနည်းငယ်မျှ၊ ထိတွေ့ရုံဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်သည့် စနစ်လို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီငွေပေးချေမှုကတော့ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီငွေပေးချေတဲ့စနစ်ကို ကဒ်နှင့်လည်းလုပ်နိုင်သလို၊ Smart Phone နှင့်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Contactless Payment ကို ကဒ်နှင့်ပေးချေခြင်း အလုပ်လုပ်ပုံ
နောက်ဆုံးပေါ် EMV ကဒ်တွေမှာ Contactless လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာ ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ဟာ တကယ်တော့ EMV Chip ထဲမှာ (RFI - Radio Frequency Interface) လို့ခေါ်တဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းကို အခြေခံတဲ့ နည်းပညာကို ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ EMV ကဒ်တစ်ခုမှာ Contactless လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီကဒ်မှာ လိုင်းအကွေး အစင်းလေးခု သင်္ကေတလေးကို တွေ့ရမှာပါ။ အဲ့ဒီလိုပဲ တစ်ချို့ EMV Reader တွေမှာလည်း Contactless ကဒ်ကို ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကို တွေ့ရမှာပါ။ စျေးဝယ်က ကဒ်ကို Contactless Reader အနားမှာ ကပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် Reader က ကဒ်ထဲက အချက်အလက်ကိုဖတ်ပြီး မှန်ကန်မှုရှိတယ်ဆိုရင် အသံမြည်ပြီး လိုအပ်ရင် စျေးဝယ်က PIN နံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။ အားလုံး မှန်ကန်မှုရှိတယ်ဆိုရင် ငွေပေးချေခွင့်ပြုမယ် (Approve)၊ မှန်ကန်မှုမရှိရင် ငွေပေးချေခွင့် ငြင်းပယ်မယ် (Decline)။
Contactless Card နှင့် Reader အလုပ်လုပ်ပုံ
Contactless Payment ကို ဖုန်းနှင့်ပေးချေခြင်း အလုပ်လုပ်ပုံ
နောက်ဆုံးပေါ် iPhone နှင့် Android ဖုန်းတွေမှာ (NFC - Near Field Communication) လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ဒီနည်းပညာက လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနှစ်ခုကို ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းပညာကိုသုံးပြီး iPhone မှာ Apple Pay နှင့် ငွေပေးချေလို့ရသလို Android ဖုန်းတွေမှာလည်း Android Pay နှင့်ငွေပေးချေလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ။ Apple Pay နှင့်ငွေပေးချေဖို့ရန်အတွက် iPhone မှာ Wallet ဆိုသည့် App ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ Wallet App က အပြင်မှာသုံးသည့် ပိုက်ဆံအိတ်လိုပါပဲ။ ကဒ်တွေ ထည့်ထားလို့ရပါတယ်။ Apple Pay နှင့်ပေးချေနိုင်ဖို့အတွက် မိမိ၏ Credit (သို့) Debit ကဒ်ကို Wallet App ထဲထည့်ပေးရပါမယ်။ ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင် iPhone က Home ခလုတ်မှာ မိမိလက်ဗွေနှင့် ငွေရှင်းကောင်တာမှာရှိတဲ့ Contactless Reader အနားမှာ ဖုန်းကိုကပ်ပြီး ငွေပေးချေနိုင်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းကို အခြားတစ်ယောက်ယောက်က ယူသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင် လက်ဗွေမတူသည့်အတွက် ဖုန်းလည်းဖွင့်လို့ရမှာ မဟုတ်သလို ငွေပေးချေသည့်အပိုင်းလည်း လုပ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Apple Pay နှင့်ငွေပေးချေနေပုံ
FinTech နှင့်ပတ်သက်သည့် နည်းပညာတွေဟာ အပြောင်းအလဲ အရမ်းမြန်ပါတယ်။ FinTech နှင့်ပတ်သက်သည့် Start-up ကုမ္ပဏီတွေလည်း အများအပြား ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ FinTech ငွေပေးချေမှု (Payment) နှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ကဒ်သုံးစွဲမှု လျှော့နည်းသွားနိုင်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။
Ko Sagaing / Software Engineer
နာမည်အရင်းမှာ လှိုင်မင်းထက်ဖြစ်ပြီး၊ ကိုစစ်ကိုင်းဆိုသည့် နာမည်ပြောင်နှင့် မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများက ရင်းနှီးစွာခေါ်ကြပါသည်။ ယခင်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင် သင်ကြားရေး နှင့် Software Development လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယခုလက်ရှိမှာ စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။
ကိုစစ်ကိုင်း၏ မှတ်စုများ. Powered by Blogger.
Copyrights @ ကိုစစ်ကိုင်း၏ မှတ်စုများ - Designed by Templateism | Distributed By Gooyaabi Templates